Sharaxaada Meta: Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Si Aad Uhesho SEO
Soo koobisidda iyo soo gaabinta
Dhise Ololaha Falanqaynta
Magaca Magaca Raadinta
Xisaabiyaha Dib-u-eegista ee Online-ka ah
Liiska Tixraaca SPAM
Xisaabiyaha Cabbirka Cabbirka
Waa maxay Cinwaankeyga IP-ga?
Waa maxay Sharaxaada Meta? Maxay Xasaasi Ugu Yihiin Istaraatiijiyadaha Raadinta Noolaha?
Khamiis, Maarso 24, 2022 Khamiis, Maarso 24, 2022 Douglas Karr
Mararka qaar suuqleyda uma arki karaan keynta geedaha. Sida ayna search engine waxay heshay dareen aad u badan tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan ogaaday in suuqleyda badani ay diirada saaraan darajada iyo taraafikada dabiiciga ah ee soo socota, waxay iloobaan talaabada dhabta ah ee udhaxeysa. Mashiinnada raadinta ayaa gabi ahaanba muhiim u ah awoodda ganacsi kasta ee ay ku wadi karto isticmaaleyaasha iyada oo ujeedadu tahay bogga boggaaga ee quudiya ujeedka alaabtaada ama adeeggaaga. Sharaxaadda moodana waa fursaddaada si aad u kordhiso sicirka ku habboon-riix-ka mashiinka raadinta illaa boggaaga.
Waa maxay sharaxaadda Meta?
Mashiinnada raadintu waxay u oggolaanayaan milkiilayaasha goobta inay qoraan sharraxaadda ku saabsan bogga guurguuraya oo loo gudbiyay makiinadaha raadinta ee ay ku muujinayaan bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP). Mashiinnada raadinta ayaa sida caadiga ah adeegsada 155 illaa 160 xaraf ee ugu horreeya ee muujintaada meta natiijooyinka desktop waxaana laga yaabaa inay u kala jajabto ~ 120 xarfood oo adeegsadayaasha moobiilka raadinta moobiilka. Sharaxaadda Meta uma muuqdaan qof akhrisanaya boggaaga, kaliya guurguurayaasha hoose.
Sifeynta meta ayaa ku jirta qaybta HTML-ka waxaana loo qaabeeyey sida soo socota:
magaca="description" content="Warshadaha Martech ee daabacaadda hoggaamineed ee baaritaanka, ogaanshaha, iyo barashada sida looga faa'iideysto iibka iyo suuqgeynta suuqgeynta iyo tikniyoolajiyadda si loo kobciyo ganacsigaaga."/>
Sidee Loogu Faa'iidaystaa Sharaxaada Meta ee Goobaha Yar Yar?
Aynu ka eegno tan laba aragtiyood oo kala duwan engine mashiinka raadinta iyo adeegsadaha raadinta:
Mashiinka raadinta wuxuu ka helaa boggaaga, ha ahaato xiriiriye dibedda ah, xiriiriye gudaha ah, ama khariidadda boggaaga maadaama ay gurguuraneyso shabakadda.
Mashiinka raadinta ayaa gurguuranaya boggaaga, isagoo fiiro gaar ah u leh cinwaanka, cinwaannada, hantida warbaahinta, iyo waxyaabaha ku jira, si loo go'aamiyo ereyada muhiimka ah ee ku habboon mawduucaaga. U fiirso in aanan ku soo darin sharaxaad meta ah tan engines makiinadaha raadinta qasab kuma ahan inay ku daraan qoraalka sharaxaad meta marka la go'aaminayo sida loo muujiyo bogga.
Mashiinka baaritaanka wuxuu ku dabaqayaa cinwaanka boggaaga bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP) gelitaan.
Haddii aad bixisay sharaxaad meta ah, mashiinka raadinta ayaa ku daabacaya taas sharaxaadda hoosta gelitaanka SERP-gaaga. Haddii aadan bixin sharaxaad meta ah, mashiinka raadinta wuxuu ku tusayaa natiijada labo jumladood oo ay u arkaan inay ku habboon yihiin waxa ku jira boggaaga.
Mashiinka raadinta ayaa go'aaminaya sida loo qiimeeyo bogga iyadoo loo eegayo ku xirnaanta bartaada mawduuca iyo inta xiriiriye ee ku habboon ee boggaaga ama boggaaga lagu qiimeeyay shuruudaha ay kugu muujiyeen.
Mashiinka raadinta waxaa laga yaabaa sidoo kale waxay kugu qiimeyneysaa adiga oo ku saleynaya haddii ay tahay ama aysan raadineynin dadka isticmaala ee gujiyay natiijadaada SERP ama ay sii joogeen goobtaada ama ay ku noqdeen SERP.
Isticmaalaha raadinta wuxuu galaa ereyada muhiimka ah ama su'aasha mashiinka raadinta wuxuuna ku degaa SERP.
Natiijooyinka SERP waa kuwo shaqsiyeed, markay suurtagal tahay, adeegsadaha mashiinka raadinta iyadoo lagu saleynayo juqraafi ahaan iyo taariikhdooda raadinta.
Isticmaalaha raadinta ayaa baaraya cinwaanka, URL, iyo sharaxaada (waxaa laga soo qaatay qeexitaanka meta).
Ereyga muhiimka ah ee adeegsadaha mashiinka raadinta ee la adeegsaday ayaa lagu muujiyay sharraxaadda natiijada SERP.
Iyada oo ku saleysan cinwaanka, URL, iyo sharaxaadda, adeegsadaha raadinta ayaa go'aaminaya inuu riixayo iyo in kale guji xiriirkaaga.
Isticmaalaha ku garaacaya isku xidhkaaga ayaa imanaya boggaaga.
Haddii boggu ku habboon yahay oo mowduuc ka yahay raadinta ay sameynayeen, waxay ku sii nagaanayaan bogga, waxay helayaan macluumaadka ay u baahan yihiin, xitaa way beddeli karaan.
Haddii boggu aanu khusayn oo mowduuc ka ahayn raadinta ay samaynayeen, waxay ku noqonayaan SERP oo waxay gujinayaan bog kale… laga yaabee qofka kula tartamaya.
Sharaxaadda Meta Miyay Saameyn Ku Yeelanayaan Qiimeynta Raadinta?
Taasi waa su’aal raran! Google ku dhawaaqay Bishii Sebtember ee 2009 in sharaxaadda meta-ka ah ama keywords key meta ay ku xiran tahay Google algorithms darajayn raadinta shabakada… laakiin taasi waa su'aal qaas ah oo u baahan dood dheeri ah. In kasta oo ereyada iyo ereyada muhiimka ah ee ku jira sharaxaaddaada meta aysan si toos ah kuugu sarreyn doonin, waxay saameyn ku yeeshaan dabeecadaha isticmaaleyaasha mashiinka raadinta. Dabeecadda adeegsadaha mashiinka raadinta ayaa gabi ahaanba muhiim u ah qiimeynta boggaaga natiijada baaritaanka la adeegsan karo.
Xaqiiqdu waxay tahay, inbadan oo dad ah oo gujinaya-boggaaga waxay kordhinayaan suurtagalnimada inay aqrin doonaan oo ay wadaagi doonaan bogga. Markay u badan tahay inay akhriyaan oo ay wadaagaan bogga, ayaa ka sii fiicnaanaya darajadaada. Markaa… halka sharaxaadda maadada aysan si toos ah u saameynaynin darajada boggaaga ee matoorada raadinta, waxay gabi ahaanba saameyn weyn ku leeyihiin dabeecadda isticmaaleha is taas oo ah qodobka koowaad ee qiimeynta!
Tusmada Meta Tusaale
Waa tan tusaale raadis, waayo halganka:
Waxaan tusinayaa tusaalahan maxaa yeelay hadii qof uun baaray "martech", waxaa laga yaabaa inay si fudud u xiiseynayaan waxa uu yahay shuhadadu, dhab ahaan ma baran wax badan oo ku saabsan ama raadinta daabacaad Waan ku faraxsanahay inaan halkaan ku suganahay natiijooyinka ugu sareeya oo aanan aad uga walwalin in hagaajinta sharaxahayga meta ay sababi doonto aragti weyn.
Xusuusin dhinac ah: Ma lihi bog la yiraahdo muxuu yahay shahiid? Taasi waxay u badan tahay istiraatiijiyad weyn aniga inaan geeyo mid tan iyo markii aan horeyba ugu sarreeyay xilligan.
Maxay sharraxaadda Meta muhiim ugu tahay Xeeladaha Raadinta Noolaha?
Mashiinka Raadinta - matoorada raadinta waxay rabaan inay siiyaan adeegsadayaashooda khibrad sare iyo natiijooyinka raadinta ugu tayada badan. Natiijo ahaan, sharaxaadda meta ayaa muhiim ah! Haddii aad si sax ah ugu dhiirrigeliso waxyaabahaaga ku jira sharraxaaddaada meta, ku dhiirrigeli adeegsadaha mashiinka raadinta inuu soo booqdo boggaaga, oo halkaas ku hay engines makiinadaha raadinta ayaa kalsooni badan ku qaba darajadaada oo xitaa waxaa laga yaabaa inay kordhiso darajadaada haddii bogagga kale ee aadka loo qiimeeyo ay keenaan in dadka isticmaala ay boun .
Raadi Dadka isticmaala - bogga natiijada natiijada mashiinka raadinta oo ay ku qoran tahay qoraal aan kala sooc lahayn oo laga soo dhexsaaray waxa ku jira bogga ma soo jiidan karo adeegsadaha mashiinka raadinta si uu u gubo boggaaga. Ama, haddii sharraxaaddaadu aysan khusaynin nuxurka bogga, waxay u dhaqaaqi karaan gelitaanka SERP ee soo socda.
Wax ka qabashada sharraxaadda 'meta' waa mid aad u fiican wajiga muhiimka ah ee bogga SEO-ga ah sababo dhawr ah awgood:
Nuqul nuqul ah - sharraxaadda meta waxaa loo adeegsadaa go'aaminta inaad haysato iyo in kale mawduucyo kala duwan gudaha boggaaga. Haddii Google uu rumeysan yahay inaad haysato laba bog oo isku mid ah oo isku mid ah iyo sharraxaadyo isku mid ah, waxay u badan tahay inay qiimeyn doonaan bogga ugu fiican oo ay iska indha tirayaan inta kale. Adeegsiga sharraxaadda maadooyinka gaarka ah ee bog kasta waxay hubin doontaa in bogagga aan gurguurto oo loo go'aansan inay noqdaan nuqul ka kooban.
Keywords - Inta Keywords looga faa'iideysto sharraxaadda meta si toos ah ha u saameyn saamaynta boggaaga, laakiin iyagu waa geesinimo natiijooyinka raadinta, adoo xoogaa u fiirsanaya natiijada.
Qiimaha Guji-Dheer - Sharaxaad meta ayaa muhiim u ah u beddelashada adeegsadaha mashiinka raadinta booqde bartaada. Waxaan la shaqeynaa macaamiisha si aan u hubino in sharaxaadahooda meta ay si aad ah u soo jiitaan isticmaalaha mashiinka raadinta, iyada oo la adeegsanayo ereyada muhiimka ah sidii diiradda labaad. Waxay u dhigantaa garoonkaaga inaad qof kaxayso si uu tallaabo u qaado.
Tilmaamaha lagu hagaajinayo Sharaxaadaha Meta:
Maqal waa muhiim. Raadinta moobiilka ee sii kordheysa, iskuday inaad iska ilaaliso sharraxaadda meta ee dhererkoodu ka weyn yahay 120 xaraf.
Iska ilaali nuqulada sharaxaada meta guud ahaan bartaada. Sharaxaad kasta oo meta ah waa inay ka duwan tahay, haddii kale mishiinka raadinta ayaa iska indho tiri kara.
Adeegso weedho taas oo akhristaha ka dhigaysa mid xiise leh ama amraya ficilkooda. Ujeedada halkan ayaa ah in la wado qofka si uu u gubo boggaaga.
Ka fogow isku xidhka sharaxaadda meta. Ku jahwareerinta isticmaaleyaasha iyaga oo ka dhigaya inay gujiyaan oo aysan helin macluumaadka aad sharaxday waa dhaqan ganacsi oo xun oo dhaawici doona awooddaada ku lug lahaanshaha iyo beddelidda martida mashiinka raadinta.
Inkastoo keywords si toos ah uma caawin doonaan qiimeyntaada, laakiin waxay kaa caawin doonaan heerkaaga guji illaa iyo inta ereyada muhiimka ah la muujiyey sida isticmaaleha mashiinka raadinta uu u aqrinayo natiijooyinka. Isku day inaad adeegsato ereyada muhiimka ah ee u dhow ereyada ugu horreeya ee muujinta meta.
Monitor darajayntaada iyo gujintaba qiime… oo aad ku hagaajiso sharraxaaddaada meta si aad u kordhiso taraafikada iyo is-beddelka ku habboon! Iskuday tijaabooyin A / B ah halkaasoo aad ku cusbooneysiineyso sharraxaaddaada meta bil ah oo aad aragto haddii aad kordhin karto beddelaadda.
Nidaamka Maareynta Mawduucaaga iyo Sharaxaada Meta
Haddii aad isticmaaleyso Squarespace, WordPress, Drupal, ama mid kale CMS, hubi inay leeyihiin awood ay wax kaga beddeli karaan sharaxaada meta. Meelaha badankood, goobta tilmaanta meta ma aha mid aad u cad markaa waxaa laga yaabaa inaad raadiso. Wixii WordPress ah, Xisaabta Xisaabta waa noo talada oo waxay siisaa isticmaaleha horudhac weyn sharaxaadda maadada sida looga arko desktop-ka ama mobilka.
Mar kasta oo aad daabacdo bog ama aad rabto inaad hagaajiso, waxaan si buuxda u hirgelin lahaa hagaajinta sharaxaadda meta si aan u kordhiyo qiimaha gujinta oo aan u kaxeeyo isticmaalayaasha mashiinka raadinta ee ganacsigaaga.
Shaacinta: Waxaan ahay macmiil iyo ku -xigeen Xisaabta Xisaabta.
Tags: isku xirka xiriirkaheerka-riixmawduucyo kala duwanintee in le'eg ayaa sharaxaad meta ahmeeqa xaraf ayaa sharaxaad meta ahisticmaalka erayga muhiimka ahkeywordstilmaanta metadhererka sharaxaadda metasharraxaadda metakeywords keyserptalooyin loogu talagalay hagaajinta sharaxaadaha meta
Douglas Karr Thursday, March 24, 2022 Thursday, March 24, 2022
Douglas Karr waa aasaasihii Martech Zone iyo khabiir la aqoonsan yahay oo ku saabsan isbedelka digital. Doug waa a Muhiimka ah iyo Suuqgeynta Afhayeenka Dadweynaha. Isagu waa VP iyo isku xidhka Highbridge, shirkad ku takhasustay caawinta shirkadaha shirkadaha si ay qaab dijitaal ah wax uga beddelaan una weyneeyaan maalgashigooda tikniyoolajiyadda iyagoo adeegsanaya teknoolojiyadda Salesforce. Waxa uu horumariyay suuq geynta dhijitaalka iyo istiraatiijiyadda wax soo saarka Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Webtrends, Iyo SmartFOCUS. Douglas sidoo kale waa qoraaga Blogging Corporate for Dummies oo co-author of Buugga Ganacsiga Fiican.
Ciqaabta Mawduuca Nuqul: Khuraafaadka, Xaqiiqda, iyo Taladayda
Ugu Fiican WordPress SEO Plugin: Darajada Xisaabta
Ka tag jawaab →
Aug 14, 2010 at 8: 57 AM
Soo jeedin weyn. Mid ka mid ah aaladaha aan ugu jeclahay WordPress All-in-One SEO wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno bogag fudud oo sharafta iyo sharaxaada ah adoon wax badan ka ogaan koodhinta. (Dhanka kale, waxaad noo soo bandhigtay All-in-One) marka waad ku mahadsan tahay labada xisaabba.
Aug 14, 2010 at 11: 23 AM
Lorraine, AIOS iyo Google XML Khariidadaha bogga ayaa ah labadayda 'waa-lahaansho' ee bog kasta oo WordPress ah. Waxaan la yaabanahay in WordPress uusan si fudud ugu dhex darin koodhka muhiimka ah markan. WordPress kaliya wuxuu kaa helaa 75% halkaa…. plugins kuwa waxay helaan aad madal si buuxda karti!
May 17, 2013 at 2: 41 PM
Qoraal cabsi leh had iyo jeer! Kaliya waxaan ka hadlayey tan bilowgii usbuuca kooxda. Mahad Doug.
May 17, 2013 at 2: 44 PM
Mahadsanid @jrdorkin: disqus!
May 18, 2017 at 6: 35 PM
Waxaan gabi ahaanba la yaabi lahaa inaan helo qof dhab ah oo ku saabsan dhiirrigelinta waxyaabaha ku jira websaydh aan lahayn sharaxaad meta ah. Markaan dadka lashaqeeyo waxaan usheegaa in qeexida meta ay tahay jirka xayeysiintooda gaarka ah ee Google. Ma isku dayi laheyd inaad wax ku iibiso joornaalkaaga oo aan lagaa siinin shayga. Dabcan maya!
May 19, 2017 at 8: 29 AM
Well ayaa yiri!
Maxay idinla tahay?	Cancel reply
Podcasts-keena ugu dambeeyay
Kate Bradley Chernis: Sidee Sirdoonka Artifishalku u Wadaa Farshaxanka Suuqgeynta Mawduuca
In this Martech Zone Wareysi, waxaan lahadleynaa Kate Bradley-Chernis, oo ah agaasimaha guud ee goor dhaweyd (https://www.lately.ai). Kate waxay la shaqeysay astaamaha ugu waaweyn adduunka si loo soo saaro istiraatiijiyado nuxur leh oo kaxeynaya kaqeybgalka iyo natiijooyinka. Waxaan ka wada hadalnay sida sirdoonka macmalka ah uu gacan uga geysanayo kaxaynta natiijooyinka suuqgeynta waxyaabaha ururada. Waayahan dambe waa maareynta warbaahinta bulshada ee AI.
Faa'iidada Isugeynta: Sida Loogu Dhiso Daqiiqad Fikradahaaga, Ganacsigaaga iyo Noloshaada Ka Soo Horjeeda Dhammaan Waxyaabaha Dhibcaha Ku Ah
In this Martech Zone Wareysiga, waxaan lahadleynaa Mark Schaefer. Mark waa saaxiib weyn, lataliye, qoraa caan ah, aftahan, podcaster, iyo lataliye warshadaha suuqgeynta. Waxaan ka wada hadalnay buugiisa cusub, Cumulative Advantage, oo ka sii gudbaya suuq geynta oo si toos ah uga hadlaya arrimaha saameynta ku leh guusha ganacsiga iyo nolosha. Waxaan ku noolnahay adduun…
Lindsay Tjepkema: Sidee Fiidiyowga iyo Podcasting-ku ay ugu soo baxeen Xeelado Suuq B2B oo casri ah
In this Martech Zone Wareysiga, waxaan lahadleynaa aasaasaha iyo agaasimaha guud ee shirkada 'Casted', Lindsay Tjepkema. Lindsay waxay labaatan sano ku leedahay suuqgeyn, waa halyeey podcaster ah, waxayna laheyd himilo ay ku dhisto madal lagu weyneeyo laguna cabiro dadaalkeeda suuqgeynta B2B ... sidaa darteed waxay aas aastay Casted! Qeybtan, Lindsay waxay ka caawisaa dhagaystayaasha inay fahmaan: * Maxaa fiidiyoow video
Marcus Sheridan: Isbeddellada Dijital ah ee Ganacsiyadu aysan Fiirin ... Laakiin Waa inay ahaadaan
Ku dhowaad toban sano, Marcus Sheridan wuxuu barayay mabaadi'da buugiisa dhagaystayaasha adduunka oo dhan. Laakiin ka hor intuusan buug noqon, sheekada Wabiga Barkadaha (oo aasaaska u ahaa) ayaa lagu soo bandhigay buugaag badan, daabacado, iyo shirar loogu talagalay qaabkeeda cajiibka ah ee u gaarka ah Suuqgeynta Inbund iyo Waxyaabaha. Tan dhexdeeda Martech Zone Wareysi,…
Pouyan Salehi: Teknolojiyadaha Wada Waxqabadka iibka
In this Martech Zone Wareysi, waxaan lahadleynaa Pouyan Salehi, oo ah ganacsade taxane ah wuxuuna u hibeeyay tobankii sano ee la soo dhaafay hagaajinta iyo otomatiga habka iibka ee iibka shirkadaha B2B iyo kooxaha dakhliga. Waxaan ka wada hadalnaa isbeddellada tikniyoolajiyadeed ee qaabeeyay iibka B2B iyo sahaminta fikradaha, xirfadaha iyo teknoolojiyada kaxeyn doonta iibka…
Michelle Elster: Faa'iidooyinka iyo Dhibaatooyinka Cilmi-baarista Suuqa
In this Martech Zone Wareysiga, waxaan lahadleynaa Michelle Elster, oo ah Madaxa Shirkadda Rabin Research. Michelle waa khabiir ku takhasusay habab cilmi baaris tayo iyo tayo leh oo leh khibrad ballaaran oo caalami ah xagga suuqgeynta, horumarinta wax soo saarka cusub, iyo isgaarsiinta istiraatiijiga ah. Wadahadalkan, waxaan ku falanqeynaynaa: * Maxay shirkaduhu maalgashi ugu sameeyaan cilmi baarista suuqa? * Sidee…
Guy Bauer iyo Hope Morley ee Umault: Dhimashada Fiidiyowga Iskaashatada
In this Martech Zone Wareysiga, waxaan lahadleynaa Guy Bauer, aasaasaha iyo agaasimaha hal abuurka, iyo Hope Morley, oo ah madaxa howlgalka Umault, oo ah hay'ad suuq geyn muuqaal video ah. Waxaan ka wada hadalnaa guusha Umault ee soo saarista fiidiyowyada loogu talagalay ganacsiyada ku kobcaya warshadaha ay ku badan yihiin fiidiyowyada shirkadaha dhexdhexaadka ah. Umault waxay leeyihiin boortofooliyo cajiib ah oo ay ku guuleystaan ​​macaamiisha…
Jason Falls, Qoraaga 'Winfluence': Dib-u-habeynta Suuqgeynta Saameeyayaasha Si Ay U Meel-mariso Sumaddaada
In this Martech Zone Wareysi, waxaan lahadleynaa Jason Falls, oo ah qoraaga 'Winfluence': Dib-u-habeynta Suuqgeynta Saameeyayaasha Si Ay U Meel Marto Magacaaga (https://amzn.to/3sgnYcq). Jason wuxuu kahadlayaa asalka suuqgeynta saamaynta ilaa habka ugufiican ee maanta kuwaas oo bixiya natiijooyin heer sare ah oo loogu talagalay noocyada geeya istiraatiijiyooyinka suuq geynta saamaynta weyn. Marka laga reebo soo qabashada iyo…
John Voung: Waa maxay sababta SEO-ga ugu waxtarka badan uu ku bilaabmayo ahaanshaha aadanaha
In this Martech Zone Wareysi, waxaan lahadleynaa John Vuong oo katirsan Raadinta Maxaliga ah ee SEO, oo ah adeeg raadin buuxda oo dabiici ah, waxa kujira, iyo wakaalada warbaahinta bulshada ee ganacsiyada maxalliga ah. John wuxuu la shaqeeyaa macaamiisha caalamiga ah guushiisuna waa mid u gaar ah la taliyayaasha maxaliga ah ee SEO: John wuxuu heystaa shahaadada maaliyadda wuxuuna ahaa korsade dijital ah oo hore, oo ka shaqeynaya dhaqanka
Jake Sorofman: Dib-u-cusbooneysiinta CRM Si Dijitaal ah loogu beddelo B2B Lifecycle Macaamiil
In this Martech Zone Wareysiga, waxaan lahadleynaa Jake Sorofman, Madaxweynaha MetaCX, oo ah hormuudka qaab cusub ee natiijooyinka ku saleysan ee maaraynta nolosha macaamiisha. MetaCX waxay ka caawisaa SaaS iyo shirkadaha wax soo saarka dhijitaalka ah inay beddelaan sida ay u iibiyaan, u keenaan, u cusbooneysiiyaan una ballaariyaan hal khibrad dijitaal ah oo ku xiran oo ay ku jiraan macaamilku marxalad kasta. Iibsadayaasha SaaS…
Ku soo dhowow Martech Zone Newsletter
Ku soo dhowow Martech Zone Wareysiyada Podcast
Martech Zone Wareysiyada Amazon
Martech Zone Wareysiyada Apple
Martech Zone Wareysiyada Google Podcasts
Martech Zone Wareysiyada Google Play
Martech Zone Wareysiyada Castbox
Martech Zone Wareysiyada Castro
Martech Zone Wareysiyada on overcast
Martech Zone Wareysiyada ku saabsan jeebka jeebka
Martech Zone Wareysiyada Radiopublic
Martech Zone Wareysiyada Spotify
Martech Zone Wareysiyada Stitcher
Martech Zone Wareysiyada TuneIn
Martech Zone Wareysiyada RSS
Hubi Adeegyadayada Mobilka
Waxaan nahay on Apple News!
© Copyright 2022 DK New Media, Xuquuqda oo dhan waa la keydiyay
Back to Top | Terms of Service | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Daah-
Falanqaynta & Tijaabada
Ganacsiga iyo Tafaariiqda
Teknolojiyada soo ifbaxaya
Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinka
Media Social Suuq
Ku xayeysii Martech Zone
Fiidiyowyada Suuqgeynta & Iibka
Soo gaabinta Suuq geynta
Wareysiyada Suuq geynta
Tababarka Suuq geynta
Sida Aan U Isticmaalno Macluumaadkaaga
Waxaan u isticmaalnaa cookies-ka boggayaga si aan kuu siino waayo-aragnimada ugu habboon anagoo xasuusnaane waxaad door bidday iyo booqashooyinka soo noqnoqday. Adigoo gujinaya "Aqbal", waxaad ogolaanaysaa isticmaalka DHAMMAAN cookies-ka.
Ha iibiin macluumaadkeyga shaqsiyadeed.
Guudmarka Gaarka ah
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa 'cookies' si loo wanaajiyo khibradaada intaad ku dhex socoto bogga. Kuwaas waxaa ka mid ah, cookies-ka loo qoondeeyey sida loogu baahan yahay ayaa lagu keydiyaa biraawsarkaaga maadaama ay muhiim u yihiin ka shaqeynta howlaha aasaasiga ah ee bogga. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa cookies-ka saddexaad ee naga caawiya inaan falanqeyno oo aan fahamno sida aad u isticmaasho degelkan. Kukiyadaas waxaa lagu keydin doonaa biraawsarkaaga oo keliya ogolaanshahaaga. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad ka baxdo buskudyadan. Laakiin ka-dhaafitaanka qaar ka mid ah buskudyadan ayaa saameyn ku yeelan kara khibradaada baalasha.
Waa lagama maarmaan
Had iyo jeer Awood
Kukiyada aan loo baahnayn waa gebi ahaan muhiim u ah shabakadda si ay u shaqeyso si sax ah. Qeybtaan waxaa ku jira kaliya cookies si loo hubiyo hawlaha aasaasiga ah iyo astaamaha ammaanka ee bogga internetka. Kukiyadaasi ma kaydiso wax macluumaad shakhsi ah.
Kukooyin kasta oo aan laga maarmi karin gaar ahaan bogga internetka si loo shaqeeyo oo loo isticmaalo si gaar ah si loo ururiyo macluumaadka shakhsi ahaaneed ee macluumaadka shakhsiyeed iyadoo la adeegsanayo falanqaynta, xayeysiisyada, waxyaabaha kale ee loo adeegsaday ayaa loo yaqaan 'cookies unnecessary'. Waa qasab in aad soo iibsato ogolaanshaha isticmaalka ka hor intaadan ku dhicin cookies-kaaga boggaaga.
SAVE & AQBAL